On https: // www.bescatray.com (kubva zvino, achaiswa vachinzi sezvo bescatray.com), mueni toga ndiyo yedu hombe. Zvinhu zvemumwe peji ino inotsanangura kuti zvemunhu mhando inogona kugamuchirwa uye dzakaunganidza ne bescatray.com uye sei mashoko ichashandiswa.
vakawanda Sezvo dzimwe nyanzvi nzvimbo, bescatray.com mari paIndaneti shambadzo. Our zivisai vadyidzani zvinosanganisira Bing Ads (Yahoo Ads). Kuti maximize paIndaneti okushambadza Roi uye kuwana chipfuro vatengi, bescatray.com aishandisa vamwe Tracking Codes kunotangira avo kutsvaka injini kuti rekodhi User IPs uye peji kuona Rwako.
We kuunganidza zvose yebhizimisi kuonana Data akatuma kuburikidza na kana padandemutande siyana pamusoro bescatray.com kubva nevashanyi. The Mushanyi kuzivikanwa uye kuonana chokuita nemashoko vakapinda ngauitwe kunoparirwa nokuda bescatray.com kuti kushandiswa dzakawanda. bescatray.com kuchaita kuchengeteka uye zvakakodzera Kushandiswa mashoko iwayo.
Ticharamba chete kushandisa mashoko ako pachako kuvezwa zvatsanangurwa pazasi, kana iwe zvakananga akabvuma rumwe rudzi kushandiswa, kana panguva pachangu kuvezwa mashoko inounganidzwa kubva kwauri kana kuburikidza neimwe nzira kubvumirana kubva kwamuri:
1.We achashandisa pachako kuvezwa mashoko kupedza chero mirairo iwe waisa.
2.We achashandisa pachako kuvezwa ruzivo kukupa chaizvo mabasa kuti iwe akumbira, akadai kusvika retailer.
3.We achashandisa mashoko ako pachako kuvezwa kupindura mibvunzo kuti atumire kwatiri.
4.We achashandisa mashoko ako pachako kuvezwa kutumira iwe na kubvira nguva nenguva, zvakadai Angaswera uye zviziviso pamusoro kushambadza edu.
5.We anogona buritsa pachake kuvezwa mashoko sezvo nomutemo kana mumatare.
6.We anogona buritsa pachake kuvezwa ruzivo kuongorora vanofungidzirwa chitsotsi, kunetswa kana zvimwe kutyorwa chero mutemo, mutemo kana murau, kana okuti kana mitemo kuti paIndaneti.
Vasarudze OUT / Corrections
pamusoro wako chikumbiro, ticha (a) akarurama kana kunatsurudza mashoko ako pachako; (b) kurega kutumira na kuti email address; uye / kana (c) chokukuvadza nhoroondo yako kuti usabate ramangwana kutenga kuburikidza nhoroondo iyoyo. Unogona kuita zvikumbiro izvi panguva mutengi mashoko chikamu, kana kuti fonera, kana emailing wako chikumbiro bescatray.com kuti Customer Support wedhipatimendi pa candy@bescatray.com. Ndapota regai paemail nhamba kadhi rako kana mamwe mashoko kugumbuka.